AAC အဖွဲ့၏ ဂေဟာတွင် ခိုလှုံနေသော အလုပ်သမား ၁ဝ၈ ဦး၏ နစ်နာမှုများ ပြန်လည်ရရှိစေရေး ဆောင်ရွက်ပေး?? - Yangon Media Group
AAC အဖွဲ့၏ ဂေဟာတွင် ခိုလှုံနေသော အလုပ်သမား ၁ဝ၈ ဦး၏ နစ်နာမှုများ ပြန်လည်ရရှိစေရေး ဆောင်ရွက်ပေး??
ထိုင်းအာဏာပိုင်များ၏ စစ်ဆေးမှုခံနေရသည့် AAC အဖွဲ့၏ ဂေဟာတွင် ခိုလှုံနေသော ဒုက္ခရောက်အလုပ်သမား ၁ဝ၈ ဦးနှင့်ပတ်သက်၍ နစ်နာမှုများ ပြန်လည်ရရှိစေရေး ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဟု ထိုင်းရှိ အလုပ်သမားသံအရာရှိရုံးက ထုတ်ပြန်လိုက် ကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါအလုပ်သမားများတွင် MoU လုပ်သား ၃၁ ဦး၊ လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်မှုကြောင့် ကိုယ်လက်အင်္ဂါ ဆုံးရှုံးပြီးရောက်ရှိနေသူ ၁၄ ဦး၊ ပွဲစားလိမ်လည်မှုကြောင့်အခက်အခဲ ဖြစ်နေသည့် အလုပ်သမား ၁၈ ဦး၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတစ်ဦး၊ မီးလောင်ဒဏ်ရာရရှိသူတစ်ဦး၊ အ ခြား အလုပ်သမားရေးရာအခက်အခဲ ဖြင့်ရောက်ရှိနေထိုင်သူ ၄၃ ဦး၊ စုစု ပေါင်း ၁ဝ၈ ဦးတို့ဖြစ်ကြောင်း ဘန် ကောက်မြို့ရှိ မြန်မာအလုပ်သမားသံအရာရှိရုံး၏ ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက် ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရသည်။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ”MoU အလုပ်သမားတွေကို ညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ်ပေးပြီး ရသင့်ရထိုက်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို ရအောင်ညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ်ပေးပြီး စီစဉ် ဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်။ ကျန်တဲ့အလုပ်သမားတွေကိုလည်း လျော်ကြေးငွေတွေရ အောင်၊ လစာမရတဲ့သူတွေကို လစာရ အောင် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်”ဟု ဘန်ကောက်မြို့ရှိ အလုပ်သမားသံအရာရှိရုံးမှ သံအရာရှိတစ်ဦးက ပြောသည်။ ယင်းအပြင် ပွဲစား၏လိမ်လည် ခံရပြီးရောက်ရှိလာသည့် လုပ်သား ၁၈ ဦးကိုလည်း တရားမဝင်ရောက်ရှိလာခြင်း ဖြစ်သော်လည်း ဖမ်းဆီးမခံရရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းပြီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ ချော့မွေ့စွာပြန်နိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတန်းများ စီစဉ်ပေးခြင်း၊ ဘန်ကောက်မြို့မှ မဲဆောက် မြို့သို့သွားရောက်ရန်အတွက်ကိုလည်း မြန်မာပြည်ပအလုပ်အကိုင်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်(MOEAF)အဖွဲ့နှင့်အတူ မော်တော်ယာဉ်များစီစဉ် ပေးခဲ့ပြီး ၎င်းလုပ်သားများကို ယနေ့တွင်ပင် မဲဆောက်မြို့ရှိ အလုပ်သမား သံအရာရှိမှကြိုဆိုကာ လိုအပ်သည့်တရားစွဲ ဆိုနိုင်ရေးတို့ကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက် ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းအလုပ်သမား သံအရာရှိကဆိုသည်။
ယင်းအပြင် နေရပ်များပြန်နိုင်ရေး အတွက်ကိုပါ မြန်မာနိုင်ငံရှိ သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ ဆက်လက်ဆောင်ရွက် ပေးမည်ဖြစ်ဟု သိရသည်။ အဆိုပါ အလုပ်သမားပြဿနာများနှင့်ပတ်သက်၍လည်း AAC အဖွဲ့အနေ ဖြင့် အလုပ်သမားရေးရာကိစ္စရပ်များကို ဆက်လက်မဆောင်ရွက်တော့ဘဲ ခေတ္တရပ်ဆိုင်းမည်ဖြစ်သဖြင့် ယင်းဂေဟာတွင် ခိုလှုံနေသောအလုပ်သမားများ ဆက်လက်နေထိုင်ရန် အခက်အခဲရှိကြောင်း လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာများတွင် ဖော်ပြခဲ့သဖြင့် ယင်းကိစ္စရပ်တို့ကိုဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ပေးရန် ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်တွင် အလုပ်သမားသံအရာရှိ ဦးမိုးအောင်ခိုင်၊ ထိုင်းအလုပ်သမားကာကွယ်စောင့် ရှောက်ရေးဌာန၊ ထိုင်းလူဝင်မှုကြီးကြပ် ရေးနှင့် MOEAF မှ တာဝန်ရှိသူများ သွားရောက်ကာ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပြီး ထိုင်းသို့လာရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်မည့် အလုပ်သမားများအနေဖြင့် ပွဲစားများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောက်ရွက်ခြင်း မပြုရန်နှင့် အေဂျင်စီများဖြင့်သာ တရားဝင်ချိတ်ဆက်လာရောက်ကြရန်နှင့် သံအရာရှိ များကိုဆက်သွယ်ကာ အကူအညီတောင်းခံ တိုင်ကြားကြရန်ကိုလည်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဆိုထားသည်။